पाथिभरा माताले सबैको रक्षा गरुन ! शनिबार कुन राशिका लागि फलदायी ? «
पाथिभरा माताले सबैको रक्षा गरुन ! शनिबार कुन राशिका लागि फलदायी ?
Published : 18 April, 2020 1:08 pm
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) स्वास्थ्य सम्वन्धी पुराना समस्याहरु ठिक हुँदै जाने तथा काम गर्न सहज वातावरण बन्नेछ । पढाइ लेखाइमा प्रतिस्पर्धीहरुलार्ई किनारा लगाउँदै अगाडी बढ्ने समय रहेकोछ । प्रेम प्रशङगमा एक अर्काविच नजिक हुने तथा रमाउँन सकिनेछ । तरपनि स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्छ सरसफाईमा बिशेष ध्यान दिनुहोला ।